Burburkii Qaran ilaa Qoys By:-Abdi M.Saleiman(Mingiste) | Toggaherer's Blog
« Darandoorriyaaba naas-naasi by: Hussen Hassan Badmaah
THE COMMISSIONER IS THE BEST OPPORTUNITY WE HAVE TODAY.!! »
Burburkii Qaran ilaa Qoys By:-Abdi M.Saleiman(Mingiste)
Soomaalida waa dad geesiyiin ah:-
“Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah waa ummadda keliya ee shaqsi dad laayey ku faano “ anigaa dadkaa laayey”,Soomaalidu waa dad geesiyiin ah sababtoo ah waa ummadda keliya ee uu ku dhex noolaan karo gacan ku dhiigluhu. ”
Waa qoraalo taxana ah oo aan ka soo qaatay Buug aan xilligan qoraalkiisa wado lana magac baxay “Burburkii Qaran ilaa Qoys. Waa qoraalo aan ku eegayo sababihii keenay burburkii ka dhacay Soomaaliya kaas oo ilaa maanta socda.
Burburka ka dhacay Soomaaliya waa mid ka soo bilowday Qarankii wuxuuna hoos u daadegay ilaa qoyskii,waxaa burburay dhamaanba qaabkii dhisme ee bulshada,waxaa burbur baaxad weyne soo gaadhay dhaqankii ,siyaasadii iyo dhaqaalihiiba,waxaa iyana meeshaba ka baxay waxay la odhan jiray dantii guud iyo dareenkii dadnimo.
Inta aan qoraaladan wado waxaan si kooban idiin fahansiin doonaa erayada ay ka mid tihiin Qaran-Qoys-Qabiilka-Qabyaalada-quudhsiga-Qoriga-Qaybinta-Qaxoontiga-qiil wadaad-Qabqable dagaal-Qoriga-Qaylo dhaanta- Qaadka-Qabsasho-Qasaaraha-Qalinka- Qoraaga-Qaado-Qurbe jog-Qudbado been ah-Qorshayaalqarsoon- Qac ku sii- Qandiga ku rido-Qabasho la,aan.
Haddii aynu si kooban u eegno geesinimadu Soomaalidu waa sidan:-
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah, sababtoo ah,waxay mudo kooban gebi ahaanba burburiyeen dhamaanba deegaankii ay ku noolaayeen ,haday dhir tahay,haday dhisme tahay iyo haddii ay wado tahayba.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah waa ummadda keliya ee dalkii ay lahayd gebi ahaanba ku burburisay nudo kooban,ee haddana ku faraxsan sida ay u burburiyeen dalkoodii.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah waxay Dowlad la,aan ku noolaayeen mudo dheer,balse waxay rumaysan in aanay waxba ka maqnayn.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah iyagoon ciidan lahayn ayaa waxay jiif iyo joog u diideen Dowlado badan oo sheegta in ay ciidan xoog badan leeyihiin.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah waa ummadda keliya ee 20 sanadood aan lahayn wax Dowlad ah ee haddana weli ku mashquulsan sidii ay Dowlad u yeelan lahaayeen.
• Soomaalidu waad dad geesiyiin ah dhinaca DIINTA,waa dad dhaqso u baran kara guud ahaanba Diinta,,waa dad wada Wadaad iyo wada sheekh ah, balse waxa ay maalin kasta faraha kula jiraan waa waxyaabo ka soo horjeeda dhamaan arimaha ay Diintu farayso.
•	Soomaalidu waad geesiyiin ah,sababtoo ah waa ummadda keliya ee shaqsi dad laayey ku faanayo “anigaa dadkaa laayey.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah , sababtoo ah, waxay gebi ahaanba iska idho tiraan shuruucda caalamka,waxayna isu haystaan in tooduun sax tahay.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah sababtoo ah waa dadka keliya ee qaarada Afrika inteeda badan ku jooga LACAG iyagoo heli kara in ay sharci ku joogaan.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah,waad dadka keliya ee isdilayey in ka badan 20 sanadood iyagoo is wada garanay, qaraabo iyo sokeeyana wada ah.
• Soomaalidu waad dad geesiyiin ah ,sababtoo ah waa dadka keliya ee loo qabtay shirar aad u fara badan,soo dhisay Dowlado badan ee hadda iyagu mudo kooban ku burburiya.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah,waa dadka keliya ee shirar amase wada hadal u fadhiyi kara 2 sanadood ee haddana go,aanadii ay ku heshiiyeen ku burburin kara maalmo gudahood.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah dhamaantood waa wada Siyaasiyiin,waxayna ka sheekayn karaan oo xafidsan yihiin dhamaanba Siyaasada dunida ka jirta ,balse waxay u maaro layihiin toodii.
• Soomaalidu waad dad geesiyiin ah ,sababtoo waa ummadda keliya ee yar iyo weynba garanayo ee weliba kuu sharixi kara dhibta haystaa nooca ah tahay ,laakiin aan garanayn si ay u maareeyn lahaayeen dhibtooda.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah waa ummadda keliya ee magaalo hore u jirtay in ay dumiyaan ,mid cusub mudo kooban ku samayn kara .
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah waa ummadda keliya ee mudo kooban ku samaysan kara shirkado ganacsi oo waaweyn balse kuna burburin kara waqti gaaban.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah waxay samayn karaan ururo aad u farabadan oo leh magacyo aad u qurux badan balse lagama yaabo in ay wax weyn ku qabsadaan dalalka ay joogaan.
•	Soomaalidu waad dad geesiyiin ah,sababtoo ah ,waa ummadda keliya ee NABADA ka dooratay ,in ay dagaal uun wado mudo dheer .
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah waxay u badheedhay TAHRIIBTA, waxay ogyihiin oo ka dheregsan yihiin dhibata ay leedahay tahriibtu ,haddana waa kuwaa ku sii qulqulaya,waana kuwa ugu badan ee maanta ku dhimanaya badaha dunida.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah,sababtoo ah,xilligan hadda la joogo waa ummadda ugu caansan xaga Budhcad badeeda,ee Maraakiibtii dunida .
• Soomaalidu waad dad geesiyiin ah,sababtoo ah waa ummadda keliya ee inta yar ee dibada joogtaa ay masruufto(biiliso) inta faraha badan ee dalka joogta.
• Soomaalidu waa dad geesiyiin ah ,sababtoo ah,waa ummadda keliya ee leh saxaafada ugu badan ee shaqsi iska leeyahay , ee maalin kasta la dhibaateeyo,hadana aan ka daalin in ay warka soo tebiyaan goobaha xabadu ka socoto.
•	Soomaalidu waa geesiyiin,sababtoo ah waxay u badheedheen dhamaanba noocyada dhibta ee dunida ka jira maanta.
Hadal iyo dhamaan geesinimada Soomaalidu waa mid u socota jaho khaldan,haddii ay sidaa ku sii socotana waxaan filayaa in ay arimuhu si ka culus sida la moodayo ay isu bedeli doonaan.
–la soco qaybta 4aad oo aan u bixiyey “sababihii burburka keenay !
F.G. markasta waxaan marti idiinka ahay wixii talo,tusaalle iyo taakulaynba ah.
This entry was posted on June 22, 2009 at 4:45 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.